Abavelisi bePowder abaThengiweyo ngaphambili-AbaThengi bePowder abaThengiweyo ngaphambili kunye nababoneleli
I-FCNS03 Fe Cu Ni Sn I-Powder esebenzayo ye-Ceramic Diamond Blade
I-FCNS03 i-Fe Cu Ni Sn I-Powder esebenzayo ye-Ceramic Diamond Blade. Nangona kunjalo, bayakwazi ukuvelisa izixhobo eziphezulu zokwenza izinto. Ukubhalwa kwangaphambili kusetyenziswa kwakhona xa ukuveliswa kwezinto ezifanayo ezivela kumgubo we-elemental kufuna amaqondo obushushu aphezulu kakhulu kunye namaxesha amade okusika. Eyona mizekelo mihle ziintsimbi ezingenazintsimbi, ezi chr ...
I-FCNS77 Fe Cu Ni Sn Isiseko sePowder esetyenzisiweyo yezixhobo zeDayimani
I-FCNS77 Fe Cu Ni Sn Isiseko sePowder esetyenzisiweyo yezixhobo zeDayimani 1. Yintoni i-Powder esele isetyenzisiwe I-powders esele isetyenzisiwe inzima, ayinyanzeleki kwaye ngenxa yoko ifuna imithwalo ephezulu yokucinezela ukuvelisa uxinizelelo oluphezulu. Nangona kunjalo, bayakwazi ukuvelisa izixhobo eziphezulu zokwenza izinto. Ukubhalwa kwangaphambili kusetyenziswa kwakhona xa ukuveliswa kwezinto ezifanayo ezivela kumgubo we-elemental kufuna amaqondo obushushu aphezulu kakhulu kunye namaxesha amade okusika. Imizekelo emihle yintsimbi engenasici, ene-chrom ...
Umxube weCopper Alloy Cu / Sn 8515 yoBhedu oSebenziweyo
Umgubo weCopper Alloy (Cu / SN) Bronze (Phambi kokuba uqeshwe) -Umgubo owenziwe ngokujikelezayo wenziwa kusetyenziswa ipremiyamu yebakala ekrwada efunyanwa kubathengisi abathembekileyo kwaye amasuntswana ayo ayimigangatho efanelekileyo. Isetyenziswa ngokubanzi kwizicelo zombane, iipasta, usetyenziso lwe-elektroniki, izixhobo zokukhuhlana kunye nezixhobo zedayimane. Ukongeza, inikwe amaxabiso aqhelekileyo. I-Fe-Cu Powder esetyenzisiweyo yomgubo obalulekileyo osetyenziselwa iintlobo ezahlukeneyo zemveliso yezixhobo zedayimane, ukuphucula ubophelelo olubukhali ...
I-CCS25 i-FeCuSn i-Powder esele iqeshwe kuMgangatho weMarble Blade
Yintoni i-CCS25 umgubo wesinyithi osele usetyenzisiwe? I-CCS25 yi-Cu, Co, Sn umgubo odityanisiweyo osele uqulunqiwe, onesakhiwo sokucoca, esingafunekiyo kunye nesihlangeneyo, esinamandla amakhulu kunye nokubamba kwidayimani, i-suitale yokuvelisa umgangatho ophezulu wokusika i-marble. 2. Iiparamitha ze-CSS25 powder Main Element Cu, Co, Sn Ubuninzi be-theory 8.29g / cm³ Sintering Temperature 760-Beding Strength 800 MPa Hardness 85-95HRB 3. InstaApp Institions -Marking a marble ...
I-FCCS07 i-FeCuCoSn i-Powde yensimbi esetyenzisiweyo yokuPhakathi ukuya kuLuhlu oluPhezulu lwezixhobo zeDayimani
I-FCCS07 i-FeCuCoSn i-Powde yensimbi esetyenzisiweyo ekuPhakathi ukuya kwiZixhobo eziMgangatho oPhezulu zeDayimani 1. Yintoni i-Powder esele isetyenziswe ngaphambili I-powders esele isetyenzisiwe inzima, ayinyanzeleki kwaye ngenxa yoko ifuna imithwalo ephezulu yokucinezela ukuvelisa uxinano oluphezulu. Nangona kunjalo, bayakwazi ukuvelisa izixhobo eziphezulu zokwenza izinto. Ukubhalwa kwangaphambili kusetyenziswa kwakhona xa ukuveliswa kwezinto ezifanayo ezivela kumgubo we-elemental kufuna amaqondo obushushu aphezulu kakhulu kunye namaxesha amade okusika. Eyona mizekelo mihle iyintsimbi ...
I-FCC58 FeCoCu Phambi kokusebenza komgubo wentsimbi ngezixhobo zeDayimani zoMgangatho oPhezulu
I-FCC58 i-FeCoCu I-Powder ye-Metal eQinisekisiweyo ngaphambili yeziXhobo zeDayimani zoMgangatho oPhezulu 1. Yintoni i-Powder esele isetyenzisiwe I-powders esele isetyenzisiwe inzima, ayinyanzeleki kwaye yiyo loo nto ifuna imithwalo ephezulu yokucinezela ukuvelisa uxinano oluphezulu. Nangona kunjalo, bayakwazi ukuvelisa izixhobo eziphezulu zokwenza izinto. Ukubhalwa kwangaphambili kusetyenziswa kwakhona xa ukuveliswa kwezinto ezifanayo ezivela kumgubo we-elemental kufuna amaqondo obushushu aphezulu kakhulu kunye namaxesha amade okusika. Eyona mizekelo mihle ziintsimbi ezingenazintsimbi, ze ...
I-FCP321 I-Powder esele igqityiwe yeDayameter Granite Saw Blade
I-FCP321 Umgubo osele usebenze ngaphambili Ububanzi beDiyamitha yeGranite Saw Blade 1. Yintoni i-Powder esele igqityiwe ngaphambili I-powders esele isetyenzisiwe inzima, ayinyanzeleki kwaye yiyo loo nto ifuna imithwalo ephezulu yokucinezela ukuvelisa uxinano oluphezulu. Nangona kunjalo, bayakwazi ukuvelisa izixhobo eziphezulu zokwenza izinto. Ukubhalwa kwangaphambili kusetyenziswa kwakhona xa ukuveliswa kwezinto ezifanayo ezivela kumgubo we-elemental kufuna amaqondo obushushu aphezulu kakhulu kunye namaxesha amade okusika. Eyona mizekelo mihle ziintsimbi ezingenazintsimbi, ezi chr ...
CCS25 Cu Co Sn Powder oqeshwe kwangaphambili kuMgangatho oPhakamileyo weMarble Saw Blade
I-CCS25 Cu Co Sn I-Powder esetyenzisiweyo yoMgangatho oPhezulu weMarble Saw Blade 1. Yintoni i-Powder esele igqityiwe ngaphambili Nangona kunjalo, bayakwazi ukuvelisa izixhobo eziphezulu zokwenza izinto. Ukubhalwa kwangaphambili kusetyenziswa kwakhona xa ukuveliswa kwezinto ezifanayo ezivela kumgubo we-elemental kufuna amaqondo obushushu aphezulu kakhulu kunye namaxesha amade okusika. Eyona mizekelo mihle ziintsimbi ezingenazintsimbi, ...
I-FCNS06 Fe Cu Ni Sn I-Powder engasebenziyo yevili leCeramic Squaring
I-FCNS06 Fe Cu Ni Sn Umgubo owenziweyo weCeramic Whearing Wheel 1. Yintoni iPowder engaphambi kokusebenza yomgubo owenziwe kwangaphambili unzima, awunakucinezelwa kwaye ngenxa yoko ufuna imithwalo ephezulu yokucinezela ukuvelisa uxinano oluphezulu. Nangona kunjalo, bayakwazi ukuvelisa izixhobo eziphezulu zokwenza izinto. Ukubhalwa kwangaphambili kusetyenziswa kwakhona xa ukuveliswa kwezinto ezifanayo ezivela kumgubo we-elemental kufuna amaqondo obushushu aphezulu kakhulu kunye namaxesha amade okusika. Imizekelo emihle yintsimbi engenasici, ene-ch ...